Lalàna : sady mandidy no homana ny mpanatanteraka – Politika
Lalàna : sady mandidy no homana ny mpanatanteraka
Home Politika Lalàna : sady mandidy no homana ny mpanatanteraka
Misy hatrany ny fironan-kevitra ny amin’ny fametrahana ny governemanta manana fahefana kokoa mihoatra amin’ireo antenimiera roa tonta, na inona na inona fitondrana mijoro. Toe-javatra izay miteraka fihenan-kasina amin’ny andraikitra maha parlemantera, ny amin’ny fanatanterahana ny raharaha samihafa mifanoaka amin’ny Lalàmpanorenena.
Ny lahateny mampiraraka ivy matetika no tsikaritra eny anivon’ny antenimierampirenena, mandritra ny fotoana hanatanterahana ny fametraham-panontaniana eo amin’ny solombavambahoaka sy ny mpikambana ao amin’ny governemanta. Mandritra io fihaonana izay tokony hiresahana ny fiainam-pirenena io, mianona amin’ny fanontaniana mikendry ny tombontsoam-paritra ny solombavambahoaka na manao lahatenim-pihombiana sy fanohanana ny mpanatanteraka, ka mametraka ho anjorombala ny ady hevitra lalina hikatsahana ny tombontsoan’ny firenena
Manome vahana ny solombavambahoaka amin’ny fahazoany manatanteraka ny asany ny vondrona parlemantera. Fototr’andraikitra iantsorohan’izy ireo ny fandaniana lalàna sy ny fanaraha-maso ny mpanatanteraka ary manana ny fahafaha-manao ampy hiatrehana izany izy ireo. Fitaovana azon’izy ireo ifotorana ny zava-boarakitry ny Lalàmpanorenana. Anisan’ireny ny fametrahana fanontaniana am-bava na an-tsoratra amin’ny mpikamban’ny governemanta, ny fampiantsoana azy ireo sy ny momba kaomisiona enti-manao famotorana. Hatreto aloha, tsy nisy nipaka hatrany amin’ny tanjona nokendrena ny fanokafana ny kaomisiona toy izany teo anivon’ny antenimierampirenena. Ankoatra izay, anefa, manana ny otri-karena hafa azon’ny hetsehina mba hamitany ny andraikiny koa ny parlemantera ary farany teo aza, dia nisitraka zo hampiasa mpitantsoroka maharitra dimy sy tsy maharitra folo izy ireo, arakaraka ny safidiny.
[wt-postfp position=left]manana ny otri-karena hafa azon’ny hetsehina mba hamitany ny andraikiny koa ny parlemantera ary farany teo aza, dia nisitraka zo hampiasa mpitantsoroka maharitra dimy sy tsy maharitra folo izy ireo, arakaraka ny safidiny[/wt-postfp]
Manana tombon-dahiny kosa ny mpikamba ao amin’ny birao maharitra noho ny fahazoan’izy ireo mpanolotsaina teknika, ankoatra ny mpitantsoroka. Afaka misitraka rafitra hoenti-manatontosa ny asany koa ny solombavambahoaka, amin’ny alalan’ny vondrona parlemantera. Ary amin’ny lafiny ara-bola, dia tsy mba isan’ny faralahin’olona eto amin’ny firenena akory ry zareo solombavambahoaka. Na izany aza, ny karama sy ny tambim-pivoriana raisin’izy ireo dia heverina fa tokony hampifanarahana amin’ny fahavitrihan’ireny olom-boafidy ireny manatrika fivoriana.
Misitraka ambony ampanga amin’ny fahazoana fahana ampiasaina amin’ny finday sy ny solika koa ny solombavambahoaka. Niantomboka tamin’ny 1 tapitrisa ariary isam-bolana ny solika azon’ny solombavambahoaka ary nipaka hatramin’ny dimy tapitrisa ariary izany tamin’ny fiafaran’ny fotoam-piasana vao tapitra farany teo. Sasanangy hafa mihitsy izay ho an’ireo parlemantera misahana andraikitra fanampiny, amin’ny maha filohan’ny kaomisiona, miiisa 31, ny filoha lefitra sy ny filoha. Mahazo avara-patana kokoa ireo mpikambana ao amin’ny birao maharitra saingy « sarotra sy tery » ny lalana hahazoana ny vaovao momba izany. Anisan’ny tombontsoa tavanan’izy ireo, ohatra, ny fahazoana fiara ampiasainy. Raha ny marina, tsy misy mampiasa araka ny tokony ho izy ny fitaovana eo am-pelatanany ny solombavambahoaka.
[wt-postfp position=right]Raha ny marina, tsy misy mampiasa araka ny tokony ho izy ny fitaovana eo am-pelatanany ny solombavambahoaka[/wt-postfp]
« Maro amin’izy ireo no mampiditra ny havany ho isan’ny mpitantsoroka. Mety tsy hampaninona izany raha tena mahavita misahana ny asa mifandraika amin’ny fanaovana lalàna ilay olona », hoy ny mpitantana iray eo anivon’ny parlemanta. « Ny iafarany dia ireo mpiasam-panjakana eo anivon’ny antenimiera ihany no misahana ny andraikitry ny mpitantsoroky ny solombavambahoaka. Mangataka amin’izy ireo ny hairaha samihafa ilaina amin’ny fantanterahana ny asany ireo olom-boafidy », hoy izy nanohy. Ohatra mivaingana noraisiny tamin’izany ny mikasika ireo asa atrehina mialoha ny amin’ny famolavolana tolo-dalàna.
Nilaza ho mahalala ny fototr’olana anisan’ny manakotsako ny solombavambahoaka manoloana ireo mpanatanteraka ny tomponandrai-pitantanana iray eo anivon’ny parlemanta. « Tsy misy hidiran’ny fahaiza-manao ilay izy fa ny herin’ny maha izay azy ireo olom-boafidy mihitsy. Tsy manana fahasahiana hitana marina ny tena andraikiny ireo solombavambahoaka », hoy izy namakafaka. « Any amin’ny mpanatanteraka izy ireo no tsy maintsy mitambezo mikasika ireo tetikasa na olana any amin’ny faritra nahalany azy. Vokany, malemy lohalika eo anoloan’ny mpanatanteraka ry zareo », hoy ihany izy. Nitondra ny heviny mikasika ny fahalemen’ny solombavambahoaka manoloana ny mpikamban’ny Governemanta, izay tokony hanara-maso ny asany, koa ny solombavambahoaka iray teo aloha.
« Tsy afaka manoha riana ny amin’ny fanapahan-kevitry ny governemanta izay tompomenakely amin’ny fitantanambola ianao. Ahiana ny mety hahavoasazy anao sy ny faritra nahalany anao raha toa ka manohitra azy ianao. Afaka mampihantona ireo asa tokony hotanterahina ho an’ny distrika niavianao izy ary manahirana ny milomano tsy manaran-drian-drano », hoy izy.« Mandritra ny fivoriana atrehina ao anaty vondrona parlemantera, ny fanontaniana mipetraka voalohany dia ny tokony hahalalana aloha ny fomba fihevitry ny Filohan’ny Repoblika mifandraika amin’ilay volavolan-dalàna naroson’ny governemanta », hoy kosa ny Solombavambahoaka iray hafa nanazava ny endrika iray hafa maneho ny fifandraisan’ny solombavambahoaka sy ny mpanatanteraka.
« Miankina amin’ny finiavan’ny mpanatanteraka hampandany na tsia ilay lalàna avy eo ny fihevitry ny solombavambahoaka, fa tsy miditra ifoton’ilay matoan-dresaka », hoy hatrany izy. « Tsy misy intsony ny fitapatapahin’ahitra mikasika ny raharaham-pirenena na farafahakeliny momba ny fanaraha-maso ny asan’ny governemanta ». Vokany, mandeha anjambany ny fanohanana na fanoherana ny governemanta», hoy izy nanohy. Toe-javatra roa mifanipaka no ateraky ny famakafakana, ka na mitoetra fotsiny ho mpitan-damba sy mpanara-davahana ny antenimierampirenena, na tena mijoro hifampitana amin’ny mpanatanteraka, izay hanjary hiteraka krizy anaty andrimpanjakana.
Antenimierampirenena, Fandaniana lalàna, Lalàna
Previous ArticleFanao mendrika ho an’ny Parlemantera : ohatra 8 fahita maneran-tanyNext ArticleKandidà tsy miankina, ny didin’ny mahaleo tena